Calaamadaha Digniinta Ah ee Cudurka Sonkorowga - Daryeel Magazine
Calaamadaha Digniinta Ah ee Cudurka Sonkorowga
Cudurka sonkorowgu wuxuu ka dhashaa khalkhal ku yimaada qaabka uu jidhku u samaysto ama u burburiyo nafaqooyinka uu u baahan yahay, taasi oo aakhirka sababta in xadiga sonkorta ee dhiiga la socotaa ay kor u kacdo ama hoos u dhacdo.
Haddii aan si kale u dhigno sonkorowga ama macaanku wuxuu qofka ku dhacaa marka beeryartu aanay soo saarayn xadi ku filan oo hoormoonka insulin ah, hormoonkaasi oo sonkorta ka kaxeeya dhiiga islamarkaana gaadhsiisa unugyada jidhka.
Cudurkan sonkorowga waxa badanaa loo yaqaanaa dilaaga aamusan, sababtoo ah waxa aad u suurtogal ah inaanad calaamadahiisa ogaan ama aanad dareemin. Badanaa dadka badankoodu ma ogaadaan inay cudurkan sonkorowga qabaan maadaamo calaamadaha ugu horeeya ee uu muujiyaa ay u muuqdaan qaar aan waxyeelo lahayn.
Inaad hore iskaga baadhaa waxay kaa caawin kartaa inaad ka hortagto cuduro badan oo khatar ah sida cudurada wadnaha, dhaawac ku yimaada kalyaha, dhaawac neerfisyada, dhaawac ku yimaada indhahaaga, cagahaaga iyo dhibaatooyin ku yimaada maqaarka jidhka.
Muuqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa 8 calaamadood oo lagu garto macaanka oo haddii aad isku aragto ay tahay inaad halis u qaadato islamarkana aad is baadho.
DARAASAD: Buurnidu Waxay Hoos U Dhigtaa Khatarta Cudurka Dementia Sababaha Keena Qawadka Iyo Calaamadaha Lagu Garto Cuntooyinka Sababa Cudurka Kansarka Ee ay Tahay Inaad Ka Fogaato Calaamadaha Dhiig Yaraanta